DAAWO: Sida xildhibaanadu lacag uga dhargeen halka xoolihi iyo dad ki abaad u le deen. bariga gobolka Mudug iyo xaalad darran soo wajadey dadka deegaannadaas. | shumis.net
Home » Layaab » DAAWO: Sida xildhibaanadu lacag uga dhargeen halka xoolihi iyo dad ki abaad u le deen. bariga gobolka Mudug iyo xaalad darran soo wajadey dadka deegaannadaas.
DAAWO: Sida xildhibaanadu lacag uga dhargeen halka xoolihi iyo dad ki abaad u le deen. bariga gobolka Mudug iyo xaalad darran soo wajadey dadka deegaannadaas.
Iyadoo dalka Uka jiro loolan xaga Zeylada Xilalka ugu sareeya dalka oo qarashaad fara badani ay siyaasiyiin ganac sato ay ku loolamayaan xilal ka aqalka hoose iyo kan sara ba hadana waxay u muuuqata in aan ba loo soo jeedin xaaladaha bani aadan nimo ee ka jira somalia,
Gaalkacyo Abaar aad u darran ayaa ka jirta deegaanno badan oo dalka ka mid ah,laakin hadda waxaa xaalad liidata ay ka taagan-tahay deegaannada ku yaalla bariga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
muqaaladi ugu danbeeyay Ee laga soo qaaday Deegaannada ayaa muujinaya abaarta taagan inaysan deegaannada soo marin dhowrkii sanno ee ugu dambeysay,waxaana le’day xoolo badan. IYADOO AY DHAWAAN CARIGU KAJIREEN XIISA DAGAAL KAAS OO DIB U DHIG KU SAMEYAY GURMAD YADI LOO FIDINN LAHAA DAD YOWGA KUWAX YEELOOBAY ABAARTAA.
Boqollaal neef oo meyd ah ayaa si talan-teel ah loogu arkaya deegaannada ku dhow degmada Jariibaan iyo deegaan xeebeedka Garacad,waxaana hadda laga soo warrinayaa dhulka inay dadku lafahooda kala baxsanayaan abaarta.
“Waxa ugu daran biyo la’aan,qoraxduna waa mid kulul,”ayuu yir mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo wariye Saciid Nadaara la hadlayay. “Hadda waxaad aragta xoolaha inay le’deen,waxaanse u cabsi qabnaa carruurta iyo dadka waayeelka ah,”ayuu ku darey hadalkiisa.
Labadii sanno ee ugu dambeysay deegaannada wax roobab ah ma helin,waxaana dadka deegaanka ay ku baaqayaan si dhaqso ah in loola soo gaaro gurmad lugu badbaadinayo dadka,maaddama ay dabar go’een xoolaha.
Puntland oo maamusha deegaannada abaarta darani ay ka jirto ayaa dhowr mar usoo jeedisay hay’adaha gargaar ah iyo bulshada in la caawiyo oo si dhaqso ah loo gaaro dadka ay abuuruhu saameeyeen,laakin waxaa muuqa gurmadku inusan wali deegaannada bariga Mudug gaarin
Title: DAAWO: Sida xildhibaanadu lacag uga dhargeen halka xoolihi iyo dad ki abaad u le deen. bariga gobolka Mudug iyo xaalad darran soo wajadey dadka deegaannadaas.
Posted by Unknown, Published at December 21, 2016 and have 0 comments